ढाड दुख्ने समस्या छ ? यसो गर्नुहोस्... - दैनिक नेपाल न्युज
ढाड दुख्ने समस्या छ ? यसो गर्नुहोस्…
काठमाडौ – कपुर ढाड दुख्ने समस्यामा मात्र नभई अन्य विभिन्न काममा पनि प्रयोग हुने गर्दछ । यो विशेष गरेर पूजापाठको लागी धेरै मानिसहरुले प्रयोग गदै आएका छन् ।
अझ यसको प्रयोग त दराजमा राखेका लुगा किराले नकाटोस भनेर पनि यो राख्ने गरेको पाइन्छ । यसलाई औषधिको रुपमा सहि तरिकाले प्रयोगमा ल्याउन स सकिन्छ ।
यसले दम रोगिका लागि पनि उपयोगि मानिने गरिन्छ । ढाड दुख्ने समस्याका लागि पनि अचुक औषधि कपुर हुने गर्दछ । साधारण खोकी लाग्दा पनि कपुर बालेर धूवाँ सुँघ्नाले खोकी निको हुन्छ ।
जीर्ण, आउँ, बाथ भएका व्यक्लिे दुई चक्की कपुर र आधा चम्चा सूठो एक ग्लास पानीमा पकाएर खादा ठिक हुने गर्दछ । द्रा नलाग्नेमा, मुर्छा पर्ने रोगका मानिसहरुका लागि पनि कपुर महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कालोपत्र गर्नका लागि काष्ठमण्डप उमा एण्ड कम्पनी जेभी, बल्खुसँग रु सात करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । वैशाखभित्र कालोपत्र सम्पन्न गरी जेठमै हस्तान्तरण गर्ने काष्ठमण्डप उमा एण्ड कम्पनीका फिल्ड इञ्चार्ज वासु थापाले जानकारी दिनुभयो ।
“अहिले विमानस्थलको कालोपत्रबाहेक सबै पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको छ, कालोपत्रका लागि प्लान्ट राख्ने तयारी थालिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वैशाखभित्रै विमानस्थल कालोपत्र गरेर सक्ने तयारी छ, अहिलेसम्म बेस, सब बेश, नाली तथा तारबारको काम सकिएको छ, कालोपत्र बिछ्याउन मात्रै बाँकी हो ।”
छब्बिस वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको विमानस्थल बागलुङ नगरपालिकाको संयोजनमा २०७४ चैत ९ गतेदेखि पुनःसञ्चालन आएर नेपाल एरलाइन्स तथा तारा एरलाइन्सले केही महीना उडान भरे पनि आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा अहिले बन्द छ ।
बागलुङ–१४ नारायणस्थानमा रहेको विमानस्थल सञ्चालनका लागि पहल गरे पनि कच्ची धावनमार्ग, विमानस्थलसँग पुग्ने सडक कालोपत्र नहुनुलगायतका समस्याका कारण २६ वर्षपछि सञ्चालनमा आएको विमानस्थल पुनःबन्द भएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र गर्न थालेको हो ।
संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन भगीरथ प्रयत्न गरिनेः सभामुख सापकोटा